Ụmụaka Marcelo Akụkọ nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Ụmụaka Marcelo Akụkọ nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; “El Loco”. Marmụaka anyị Marcelo Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Real Madrid Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Casemiro Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Marcelo Biography nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Cemụaka Marcelo Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Maka ndị na-ebido ebido, ọ na - aza aha zuru oke - Marcelo Vieira da Silva Júnior. A mụrụ akụkọ ntụrụndụ Brazil na 12th nke May 1988 na Rio de Janeiro, site na nne na nna, Mr na Mrs Marcelo Vieira da Silva.
Nna Marcelo bụ onye ọkụ ọkụ, nne ya bụ onye nkuzi lara ezumike nká. O tolitere na Catete Neighborhood na Rio de Janeiro, Brazil.
E nwere ọtụtụ ịda ogbenye na agbata obi ya n'oge ọ bụ nwata. Ọbụna ndị nne na nna Marcelo bụ ndị na-akpata obere ego dara ogbenye.
N'okwu Marcelo, “Papa m gosiri m uwe elu ya mgbe m bụ nwata. Amaara m na ọ dịghị mgbe ọ chọrọ ka m nwee ọchịchọ ahụ ịghọ ọkụ ọkụ n'ihi na ha niile dara ogbenye.
Nke bụ isi, enweghị m agụụ ọ bụla ịghọ ọkụ ọkụ, naanị ihe m chọrọ bụ ịgba bọọlụ dịka nwatakịrị. ”
A maara Marcelo mgbe niile na ọ bụ nwata na-enwe obi ụtọ n'oge ọ bụ nwata.
N'okwu ya ọzọ, “Ee, site n’oge m bụ nwata, na-enwe ma-ọbụ n’enweghị nsogbu, Amụtara m na na ndụ ị ga-enwe a toụrị n’agbanyeghi ihe ọbụla, ma ọbụ opekata mpe gbalịa ịdị.
Anọ m na-adị otu a na ndụ m, m na-anwa ibunye ya n'ime ụlọ mkpuchi na egwuregwu ọ bụla. Obi ụtọ na-enyere gị aka nke ukwuu. ”
N'ịchọ ịchọta isi ego nke ego iji nyere ezinụlọ ya aka, nwa agbọghọ Marcelo kpebiri ime ndụ ya. Ọ na-ahọrọ football.
Eziokwu Marcelo Biography - Mmalite Ọrụ:
Dị ka o kwesịrị ịdị, Football ghọrọ ịhụnanya mbụ ya. Ọ malitere ịkụ bọl n'okporo ámá na futsal n'akụkụ osimiri.
Marcelo malitere igwu egwu football ise mgbe ọ dị afọ 9 ma site na 13 ọ nọ na Fluminense, ụlọ ọrụ ntorobịa Brazil mara mma.
Marcelo fọrọ nke nta ka ọ hapụ ụlọ akwụkwọ mmuta n'ihi na ọ nweghị ike ịkwụ ụgwọ maka ụgbọ ala iji kpọrọ ya maka ọzụzụ. Ka o sina dị, mkpebi ya na ikike ya mere ka ọ lụọ ọgụ maka ihe ọ hụrụ n'anya na ọ kacha mma na - football.
Mkpokoro nwata ya, Fluminumin nyeere aka. Ha weere ya dịka otu n'ime ha "Okpu eze" ma hụ na ọ nọgidere na-egwu egwu. Njikwa ụlọ ọrụ ahụ gara ụfọdụ n'ime mkpa ya.
Everton Soares Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
A maara Marcelo dị ka onye dị oke ọsọ, na-awakpo onye na-agbachitere ya bụ onye nwere ike ịrụ ọrụ ụbọchị niile. N'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ ebe ndị na-egwu egwuregwu n'ụwa niile nọ. Ọ bụ Real Madrid jidere ya. Marcelo sonyeere Real Madrid n'oge windo mbufe na Jenụwarị na 2007.
Mgbe ọ bịarutere, Onye isi oche ọgbakọ Ramón Calderón kwuru, “Ọ bụ ihe dị mkpa ịbanye anyị.
Ọ bụ onye na-eto eto nke ga-agbanye ume ọhụrụ n'akụkụ ma bụrụ akụkụ nke atụmatụ anyị iji mee ka ndị na-eto eto banye n'òtù ahụ. Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu n'ihi na ọ bụ pealu nke ọkara Europe chọrọ.
Ọtụtụ ndị na-ekiri ya na-eto ya dị ka Roberto Carlos'onye nwere ike ịnọchi na ọrụ aka ekpe.
Anderson Talisca Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ndụ Ezinụlọ Marcelo:
Dị ka e kwuru na mbụ, Marcelo sitere na ezigbo ezinụlọ. O nwere ike ịnọnyere ha ruo oge 8 tupu ị chọọ ebe ịta nri.
Ndị mụrụ ya nọ n'ọkwa dị ala nke ọrụ ha (ọkụ ọkụ na nkuzi). Mgbalị ha na-agba iji nyere nwa ha nwoke aka ịkwụ ụgwọ ya n'agbanyeghị ụgwọ dị ala ha enweghị ike inyere. Otú ọ dị, Marcelo ka na-enwe ekele.
Gabriel Baby Jesus Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Echiche
O chetara otu ugboro;
Ee, n’enweghị obi abụọ. Ana m akwụ ndị ezinụlọ m ụgwọ dị ukwuu, ebe ọ bụ na ha na-anọnyere m mgbe niile. Nna m, nne m nọ ebe ahụ ma nna nna m bụ onye m na-akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na m na-egwu egwu, ha ga-agwa m, mba, ị gwaghị egwuregwu, ị bụ onye kachasị mma n'ebe ahụ. Ha na-agba m ume mgbe niile.
Amaghi ihe banyere nne Marcelo.
Fernandinho Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
SISTER: Laa azụ n'oge ọ bụ nwata, ọ dịghị ezigbo enyi na nwanne nwanyị ka mma karịa Julia Vieira. Ha abụọ dị nnọọ nso.
NNE: San Pedro bụ nna nna Marcelo kwụrụ ụgwọ ka o wee nwee ike ịgba bọọlụ na Brazil.
Marcelo na-enyefe ya na nwunye ya ihe mgbaru ọsọ ọ bụla. O kwuru maka Real Madrid TV na ọ bụrụ na ọ bụghị maka Pedro na ya agaraghị agba bọl maka Fluminense. O di nwute, Pedro nwụrụ na July 2014, n'oge iko ụwa.
Ọ bụrụ na anyị emeghị ihe ọjọọ, ọ bụ Señor Pedro sonyeere ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọzụzụ ntorobịa ya, ọbụnakwa rụọ ọrụ abụọ ma ọ bụ atọ iji kpata ego ka Marcelo nwee ike ịzụ.
N'oge ahụ, ọ rụrụ ọrụ dịka ọkwọ ụgbọala maka ụlọ akụ na Brazil, mgbe ahụ, ọ rụkwara ọrụ na ụlọ ọrụ niile maka Marcelo.
N'oge ahụ, Marcelo aghaghị ịkwụ 13 ụgwọ akwara otu ụbọchị ka a zụọ gị, nke ahụ dịkwa ọtụtụ na Brazil. Ọ bụ San San Pedro bụ onye kwụrụ ụgwọ ahụ.
N'okwu Marcelo; Otu ụbọchị, Don Pedro enweghị ego maka ọzụzụ gị, ọ gwara m, "Enwere m mkpụrụ ego ndị a." Kedu ihe mere?
Were nọ n'ime mmanya, mba? …. O nwere otu ezigbo ego, ma enwere igwe oghere ndị a, ebe ị nwere ike igwu egwu maka 25 centavos. Na ụbọchị ahụ, anyị enweghị ego ọzọ ị ga-eji gaa ọzụzụ.
Ọ ghaghị ịkwụ ụgwọ tiketi ụgbọ ala, mana enweghị m, n'ihi na abụ m nwata. Ya mere, o tinyere mkpụrụ ego ahụ… M ka na-echeta taa na igwe ahụ nwere mba dị iche iche - Spain, Brazil, ihe niile, na iji merie, ị ga-ahọrọ obodo ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Ọ na-etinye mkpụrụ ego ahụ na Croatia, anyị wee merie 25 reale. N'ụbọchị ahụ, m riri ihe niile - hamburgers… N'ihi ya, mkpụrụ ego ahụ, ị ​​nwere ike ịga ọzụzụ. ”
N'ụzọ bụ isi, ọ bụ onye kwenyere Marcelo kachasị n'oge ọ bụ nwata. Marcelo nyere nna nna ya ụgwọ mbụ ya niile.
Ọnye na-bụ Clarisse Alves? Nwunye Marcelo:
Marcelo bụ nwoke na-emekọ mmekọrịta ogologo oge. O zutere ịhụnanya mbụ ya, Clarisse Alves mgbe ọ na-egwu futsal n'akụkụ osimiri n'oge ọ bụ nwata.
Lovehụnanya Marcelo nwere.
Ihe si na mmekọrịta dị ogologo oge ha dị mma na mma. Na 2008, Marcelo lụrụ di na nwunye ya bụ Clarice Alves.
Marcelo agbamakwụkwọ Foto.
Na 24th nke September 2009, ha mụrụ nwa mbụ ha, nwa nwoke ha kpọrọ Enzo Gattuso Alves Vieira.
Marcelo na Ọkpara, Enzo Gattuso Alves Vieira - Ihe Nna Na-enweghị Nkọwa / Nwa.
Marhụnanya Marcelo nwere maka nwa ya pụtara ìhè. Ọ bụrụ na mmekọrịta nna na nwa nwere ike belata n'ezie na bayoloji, ụwa niile ga-enwu site na ebube nke Marcelo na nwa ya nwoke Enzo.
Marcelo na Son na-egwuri egwu, Enzo Gattuso Alves Vieira.
Nwa ha nwoke nke abụọ, Liam na-egbuke egbuke dị na foto dị n'okpuru ebe a mụrụ na 1st nke September 2015.
Marcelo na umuaka.
Eziokwu Marcelo Biography - Nkịta mbụ tupu Smụ:
Nkà ihe ọmụma Marcelo nke Nkịta tupu onsmụ- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe.
Ka anyi mata Marcelo onye ahu. A gwara ya otu ugboro; “Gịnị bụ ihe omume ntụrụndụ unu? Kedu ụbọchị nkịtị ga-adị ka gị? ”
“Isoro ndị nkịta na-egwuri egwu, mụ na nwa m nwoke egwuri egwu. Bịanụ Marcelino !!!… onye na-agba ajụjụ ọnụ kwuru], na-aga ihe nkiri, nke bụ ebe m na-aga mgbe a gbara ajụjụ ọnụ a, na-agagharị na Madrid, ihe ndị dị otú a, na-apụ iri nri. ”
Marcelo na-eme ka ọchị ọchị ya na nke kasị mma maka nwunye ya Clarice, nkịta ya atọ na nwa ya nwoke, dị ka ọ dị!
Eziokwu cedị Marcelo:
Mgbe anyị na-achọ ịnọrọ dị ka ndị na-enweghị isi na-enweghị isi, o doro anya na egbugbu Marcelo mara mma nke ukwuu. N’agbanyeghi n’otu n’otu n’ime onyogho ndị ahụ dị nzuzu dịka okpokoro isi.
Nnukwu ink bụ nke nna nna ya 'Pedro' bụ onye ka bụrụ onye kachasị emetụta ndụ ya.
Ekele toro site akụkọ na-emeghị eme:
Mgbe okirikiri oge ya, Marcelo toro site na ndị dike football dị ka Paolo Maldini na Diego Maradona, onye kpọrọ ya onye kasị mma n'ọkwá ya.
A na-atụle ya mgbe niile na Roberto Carlos, onye onwe ya kwuru na Marcelo bụ onye nketa ya, nke kachasị mma n'ụwa na nke ahụ "Marcelo nwere ikike ọrụ aka karịa m".
Na 26 July 2011, Marcelo nwetara mba Spanish, nke na-enye ya ohere ịdebanye aha ya karịa karịa onye ọkpụkpọ na-abụghị EU, nke enwere oke nkwekọrịta kwere.
Marcelo Tax Fraud Akụkọ:
A na-ebu onye Brazil ebubo na ọ bụ ndị ọchịchị ụtụ isi nke Spanish na-emegbu onwe ha na € 490,917.70 (£ 437,539.59). Ihe ebubo nke ndị ọkàiwu Spanish kwadoro na 2013.
Dị ka ndị nchọpụta si kwuo, a na-ekwu Marcelo na ọ ga-eji ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ na-ejide ikike ya. Nke a gosipụtara nke a n'aka onye isi ụtụ isi nke ụtụ isi Spanish. Ha abụọ C Ronaldo na Lionel Messi ahụla uto nke a.
Ihe Real Madrid pụtara ya:
Kedu ihe ịbụ onye ọkpụkpọ Real Madrid pụtara nye gị?
N'ajụjụ ọnụ a, ọ sịrị…
Vinicius Junior Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
“Echere m na ọ bụrụ na ị jụọ ụmụaka nọ na Brazil, ma ọ bụ ebe ọ bụla n’ụwa, ihe ha chọrọ ịbụ, ha sịkwa ndị egwuregwu bọọlụ, ị jụzie ebe ha zaghachiri Real Madrid.
Abụ m otu. Ndị enyi m. Echere m na Real Madrid na-anọchite anya ihe buru ibu, ọ bụghị naanị n'echiche nke football kamakwa site na enyemaka ha na-enye ụmụaka nọ ná mkpa. Ọ bụ nnukwu ọgbakọ. ”